फेरी आयो नेपाल टेलिकमबाट खुसीको खबर ! - Muldhar Post
फेरी आयो नेपाल टेलिकमबाट खुसीको खबर !
मूलधार सम्वादाता २०७४, ६ पुष बिहीबार 402 पटक हेरिएको
काठमाडाैं- दशै दिपावलीमा बोनस सेवा सकिएको एक महिनामै फेरी नेपाल टेलिकमले जाडो महिनाका लागि ग्राहकका लागि बोनस सहितको विशेष प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ ।
नेपाल टेलिकमले विन्टर All Time DATA Pack अन्तरगत १२ रुपैयाँमा ३ दिनको लागि २५ MB र २५ MB वोनस DATA Pack उपहार दिने जनाएको छ । , यस्तै ६० रुपैयाँमा १ सय ५० एमबी र बोनस स्वरुप १ सय ५० एमबी नै डाटा दिने भएको छ ।
यस्तै टेलिकममले १ सय २० रुपैयाँमा ५ सय एमबी र बोनस ५ सय एमबी गरी १ हजार एमबी डाटा दिने भएको छ । यस्तै सस्तो मुल्यमा रात्रीकालीन डाटा प्याकेज अन्तरगत १२ रुपैयाँमा १ सय २० एमबी, ६० रुपैयाँमा ७ सय एमबी र १ सय २० रुपैयाँमा १६ सय एमबी डाटा पाइने टेलिकमले जनाएको छ ।
यस्तै फेसबुक र ट्वीटर मात्रै प्रयोग गर्नको लागि पनि नेपाल टेलिकमले सस्तो अफर ल्याएको छ । एसएमएस सेवामा पनि १० रुपैयाँमा १ सय एसएमएस पठाउन सकिने टेलिकमले जनाएको छ । यो योजना पुस ७ गते देखि माघ २१ गतेसम्म लागु हुने टेलिकमले जनाएको छ ।
तपाइको मोबायल फुल भयो
युट्युवमा जस्तै इन्स्टाग्राम रिल्सबाट
मंगल ग्रहमा जीवित रहन
प्रतिघण्टा १ सय २०
नेपाल टेलिकमले ल्यायो अहिलेसम्मकै
यसरी कमाउन सकिन्छ फेसबुक